Fijerena ny « sosialim-bahoaka » tao Ampanihy, Ambovombe ary Taolagnaro | Primature
Fijerena ny « sosialim-bahoaka » tao Ampanihy, Ambovombe ary Taolagnaro
Mahazoarivo, ny 26 febroary 2022 – Toromarika avy amin’ny Filohan’ny Repoblika ny hijerena ny eny ifotony, mba hifampitsinjovana ao anatin’ny fotoan-tsarotra, satria misy fiantraikany amin’ny fiainan’ny tsirairay ny fandalovan’ny rivodoza.
Araka izany dia tonga tao Ampanihy, Faritra Atsimo Andrefana, ny Praiminisitra Ntsay Christian, mitarika ny governemanta hizara ny Tosika Vonjy Aina sy ny Vatsy Tsinjo ho an’ireo traboina sy marefo, ao anatin’ny fiarenana tamin’ny rivodoza Emnati.
Nambaran’ny Praiminisitra fa tsy maintsy hotanterahin’ny fitondram-panjakana ny fanatsaràna sy famatsian-drano ny tanàna. Hohatsaraina ihany koa ny tolotra ara-pahasalamàna ho an’ny vahoakan’Ampanihy (ny fitsaboana nify, ny toeram-pandidiana), ary hamboarina avokoa, araka ny fifampiraharahàna natao tamin’ny Banky Iraisam-pirenena, ny simba amin’ny lalam-pirenena faha-10, manomboka eo Andranovory hatrany Ambovombe.
Tosika Vonjy aina 126 ary Vatsy Tsinjo 500 no nozaraina teto an-toerana.
Nitohy tao Ambovombe, Faritra Androy, ny fitsidihan’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ireo mpanara-dia azy, hisitraka Vatsy Tsinjo 400 isa, sy Tosika Vonjy Aina 800 ny vahoaka ao amin’ny distrikan’Ambovombe Androy.
Fantatra ihany koa nandritra ny fitsidihany tao Ambovombe fa hojerena manokana ny fiarovana ny voly tsako (katsaka) ao amin’ny Faritra Androy, amin’ny alalan’ny fifehezana ny olitra lezionera (chenille légionnaire).
Taorian’Ambovombe dia nigadona tao Taolagnaro, renivohitry ny Faritra Anosy, ny delegasiona notarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian. Ny fiahiana ny « sosialim-bahoaka » hatrany no lohahevitra nanatanterahana ny fitsidihana.
Natolotry ny fitondram-panjakana tao amin’ny Camp Flacourt ny Vatsy Tsinjo 400 isa, ary nomarihin’ny Praiminisitra fa hampitomboina ny masomboly hozaraina amin’ireo tantsaha ao amin’ny Faritra iray manontolo.
Ho avy ao amin’ny Faritra Anosy ihany koa ny « asa tagnamaro » iarahana amin’ny FID, handraisan’ny vahoaka anjara amin’ny fanarenana ny fotodrafitrasa simba rehetra (sekoly, hopitaly, CSB, sns).
← Conseil du gouvernement du Mercredi 23 février 2022
« Vatsy Tsinjo » sy « ACT-HIMO » tao Amboasary Atsimo →
Fitsidihana ny distrikan’i Maroantsetra
Fivorian’ny « OMC »